Walaacii laga qabay xawaladaha Minnesota oo sii kordhay | Moment Union Somali Diaspora
Posted on December 29, 2011 by momentunion
Minneapolis – Bilaawgi Bishii aanu ka soo gudubnay ee November ayeey aheed markii war ka soo baxay Franklin Bank oo ahaa Bangiga kaliya ee calaqaadka kala dhaxeeyay xawaladaha Somaalida ee ka howgala Wadankan Mareykanka Gar ahaan kuwa reer Minneasota uu sheegay in uu damacsanyahay in uu xaro ilaaqadka kala dhaxeeya xawaladaha Somaalida 14 December oo anu hada ka soo gudubnay.
Wadahadalada oo xiligaas u muuqday in la isku mari la’yahay ayaa sida muuqatay waxaa soo fara galiyay Maamulka Gobolka Minnesota oo sida muuqatay isku dayayay in ay dhaxdhaxadin iyo isfahan ka dhaliyaan wadahadalada ayaa waxba ka soo naso cadan wayeen, balse Franklin Bank ayaa ka dhawaajiyay in uu Labo isbuuc ku darayo mudadii uu horay u qabtay oo aheed sidan kor ku soo xusnayba 14 December oo uu garsinayo 30 December oo labo maalmood oo qura ka dhiman yihiin.
Sida aan ka soo xiganay qaar kamid ah Dadka ka shaqeeya xawaladaha, ayaa sheegaya in Qoraal uu soo gudbiyay cidii Kirismiska ka hor Franklin Bank ku qeexay in uu go’aankoodii yahay sidii hore, eysan wax iska badalin mudadii uu u qabtay in Xawaladaha Somaalida ay kala qataan waxii iskugu dhimanaa, mudadaasna markii la garo la soo afjari dono cilaqadkoodii mudada soo socday.
“Runtii Maantay xaalada sidii hore waa ka duwantahay sidaa u jeedid intaan oo Qof waxeey isku dayayaan in Qof walba wax diro bishaan, balse Qof walba waxa uu ku rajoweyn yahay in wax is badali donaan insha alaah,waayo ayaga wax beey qorsheeyeen ilahayna midiisii mesha kama maqna” Sidaas waxaa yiri Saciid Ciise oo markas aan la kulmeenay Saf ugu jiray sidii uu eheladiisa ku nol Kenya wax ugu diri lahaa.
Dhanka kale Qaar kamid Hey’adaha u dooda Xuquuqda adanaha ayaa ka codsaday in Dowlada Mareykanka fara galiso arintan cusub oo soo kordhay & sidoo kale ayagoo ka digay in arintan lagu joojinaayo xawaladaha Somaalida ay keeni karto xaalad aan ka soo waqsasho laheen oo ku timaada dadka ku noql gudaha Wadanka Somaaliya oo ay sheegeen in inta badan ay dadkas ku tiirsan yihiin bilasha ay ka helan eheladooda joga USA siiba dadka Minnesota.
Ugu danbeentii arintaan ayaa la ogeen halka ay saldhigan donto, balse wixii ku soo kordha mudadaas loo qabtay Xawaladaha kala soco Xogta Wararka Xaqiiqada .